စက်တင်ဘာလ 19, 2021 သဘော 0
The New York Times မှ OpEd (အကြမ်းဖက်မှုစစ်ပွဲသည်အစကတည်းကအဂတိလိုက်စားခဲ့သည်Laila Lalami မှမကြာသေးမီကတင်ခဲ့သော OpEd ကဲ့သို့အခြားအောက်တွင်ပြန်တင်သည်။၉/၁၁ တွင်ငါတို့မေ့သောအရာ - ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဟူသောအဓိပ္ပာယ်အစစ်အမှန်) တာလီဘန်တို့တားမြစ်ထားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ချေများကိုလက်ခံယုံကြည်ခဲ့သူများ၏ကံကြမ္မာကိုလွတ်မြောက်ရန်အပူတပြင်းကြိုးစားခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်း။ ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ အခြားအင်္ဂလိပ်စကားပြောအခွင့်အလမ်းရှိသောလူငယ်တစ် ဦး သည်သူ၏မြင့်မားသောလစာကိုစကားပြန်တစ် ဦး အဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဆိုးရွားသောလူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းသို့ ဦး တည်စေခဲ့သောနှစ် ၂၀ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၏သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးဆက်တစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ စစ်ပွဲအားလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖုံးကွယ်ထားသောအင်္ဂါရပ်များ အမေရိကန်နှင့်နေတိုးအတွက်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုဖြစ်ရပ်ဆိုး၏မိုးရွာသွန်းမှုအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုကိုချော်လဲစေရုံမျှမက၊ Farah Stockman ၏အက်ဆေး၌ပြောသည့်အတိုင်းအဂတိလိုက်စားမှု၏အဓိကသော့ချက်ကိုစစ်မှမကြည့်နိုင်ပါ။ Laila Lalami ရေးသားခဲ့သောယခင်ပို့စ်၏အမှန်တရားသည်လည်း၎င်း၏လူ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မဆိုင်ပါ။
“ အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း” သည်“ မရည်ရွယ်ဘဲ” သေဆုံးခြင်းနှင့်“ ပစ်မှတ်မရှိသော” မြေများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းလမ်းများ၊ အဆက်မပြတ်ပျက်စီးခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၏ခန့်မှန်းခြေအကျိုးဆက်များအတွက်ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဖျက်ဆီးခံရသောလယ်ယာများ၊ ဒုတိယမြောက်ဗုံးကြဲလန်ဒန်မြို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၌အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေသည်။ ခြေတုလက်တုကလေးများနှင့်ဓာတ်ပုံများ ကြောက်လန့်တကြားပြေးလွှားနေသောမိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး၊ napalm ဗုံး၏သားကောင်၊ ဗဟိုအမေရိကနှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲများမှပုံရိပ်များ၊ ကဘူးလ်လေဆိပ်၌အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦး ကိုသတ်ခဲ့သော ISIS တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဒရုန်းယာဉ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအားစီစဉ်သူမဟုတ်ဘဲအကူအညီပေးရေးလုပ်သားတစ် ဦး နှင့်သူ၏မိသားစုကိုသတ်ခဲ့သည်။ အာဖဂန်စစ်ပွဲ၏အဆုံးတွင်ထိုလေဆိပ်မှထွက်ခွာသောလေယာဉ်ပေါ်မှပြုတ်ကျသေဆုံးသည့်လူငယ်လေးတစ်ယောက်သည်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှု၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသော်လည်း ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သောအဖြစ်ဆိုးများ” (ဤနေရာတွင် ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သောအနှစ်သာရ) အဖြစ်ဆိုးများကိုလက်ခံရန်၊ စစ်ပွဲ၏လှုံ့ဆော်မှုများကို ဦး တည်နေသည့်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုလိုက်ရန်သာအဓိကကျသည်။ “ လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ကာကွယ်မှု (သို့) ယင်း၏လူမျိုးစုပြည်နယ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့်“ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝပုံစံ” သည်“ ရှုံးနိမ့်ရမည်” ဟူသောမကောင်းသောအင်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာစုနှစ်များစွာအတွက်“ ကာကွယ်ရေး” အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုးနှင့်စစ်ပွဲ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ကိုယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့်ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းခံရသည်။
အရင်တုန်းကစစ်ပွဲများမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများမှ“ ခဲယမ်းမီးကျောက်ထုတ်လုပ်သူများ” ၏ရာဇ ၀ င်များကိုသရုပ်ဖော်ပြသောပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိပ်မရင်းနှီးပါ။ အချို့သောနိုင်ငံသားများသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်နက်စက်ရုံများမှလုပ်သောဓနအချို့နှင့်“ စစ်ပွဲအမြတ်အစွန်းများ” ကိုသိကြသည်။ အမေရိကန်စစ်တပ်ဘတ်ဂျက်သည်လက်ရှိအငြင်းပွားဖွယ်ရာရင်းမြစ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှငါတို့သည်သေစေနိုင်သောတူရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းမှအကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်ရခြင်းသည်ဤ VE (ဥရောပ၌အောင်ပွဲ) ကြာရှည်ထွန်းကားခဲ့သောစစ်စီးပွားရေးတစ်ခု၏အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ပုံရသည်။ VJ (ဂျပန်တွင်အောင်ပွဲခံ) နေ့များ ငါတို့ကပြောတယ် စစ်ပွဲမရှိရင်အနိုင်ရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌…“ အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲစတင်ချိန် မှစ၍ လက်နက်တန်ဖိုးများ ၉၀၀% မြင့်တက်လာသည့်ကွန်ဂရက်မှအဖွဲ့ဝင်လေးဒါဇင်နီးပါးသည်လက်နက်ကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်ရှယ်ယာများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ စစ်ပွဲစနစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Naomi Klein ကဲ့သို့သောဒုက္ခများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်ပြသနေသူဖြစ်သည်။ဘေးအန္တရာယ်အရင်းရှင်စနစ်။ ” အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအားစစ်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းမှလုပ်ရမည့်အမြတ်အစွန်းရှိသည်။
အာဖဂန်စစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ Stockman က“ အဂတိလိုက်စားမှုသည်စစ်ပွဲတွင်ဒီဇိုင်းအမှားတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ” ဤအထူးနေ့များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်နှင့်နေတိုး၏“ အကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်” အနှစ် ၂၀ တလျှောက်လုံးတွင်အများပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုဆိုးရွားသောချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ ရယူထားသည်။ ပြီးတော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလေးနက်ပြီးချဲ့ထွင်ဖို့လိုတယ်။ ငါတို့ငြိမ်းချမ်းရေးပညာတတ်များသည်လည်းစစ်ပွဲအားလုံး၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမည်၊ ၎င်းကိုတိုက်ခိုက်ရေးနယ်ပယ်ထက်ကျော်လွန်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ငါတို့မကြာသေးခင်ကငါတို့အမှတ်ရနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားဖို့၊ အထိမ်းအမှတ်အချို့ကိုဖျက်သိမ်းသင့်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမြှင့်ရင်း၊ ငါတို့အခုငါတို့ရဲ့အပြင်းအထန်စိန်ခေါ်ပြီးထင်ရသောချို့ယွင်းနေတဲ့အင်စတီကျူးရှင်းတွေအပေါ်တက်ကြွစွာနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ပြောင်းလဲပြီးဖျက်သိမ်းသင့်သည်။ အမြဲလိုလိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စကိုမြှင့်တင်ရမည်၊ သို့သော်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုများသည် ပို၍ ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးသည်အများပြည်သူကောင်းကျိုးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသောအခါစံနှုန်းများအရ၎င်းကိုဖျက်သိမ်းရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်ပွဲအတွက်အခြားနည်းလမ်းများကိုအလေးအနက်ထားပြီးစနစ်တကျလေ့လာရမည်။ (ဘား၊ ၉/၁၈/၂၀၂၁)
Farah Stockman, New York Times မှ
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - နယူးယောက်တိုင်းမ် စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁)
ယင်းကိုစဉ်းစားပါ Hikmatullah Shadman ၏ဖြစ်ရပ်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်ကအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့များသည်ကန်ဒါဟာသို့ ၀ င်ရောက်လာသောအခါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာရှိသေးသောဒေသခံရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏လစာထက်အဆ ၂၀ ပိုပေးခဲ့သည်။ သူ့ကို New Yorker မှာ သူ၏အသက် ၂၀ နှောင်းပိုင်းတွင်သူသည်အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများသို့ထောက်ပံ့ပေးသောထရပ်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးသူ့အတွက်ဒေါ်လာသန်း ၁၆၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
Shadman ကဲ့သို့အကြော်သေးသေးလေးသည်ကြောက်လန့်ဖွယ်စစ်ပွဲတွင်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာလျှင် CIA တာလီဘန်များကိုမြို့မှမောင်းထုတ်ရန်ကူညီခဲ့သည့်အချိန်တုန်းကသူရဲကောင်း Gul Agha Sherzai ဘယ်လောက်တောင် ၀ င်လာသလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါ။ သူ၏ကြီးမားသောမိသားစုကကျောက်စရစ်မှပရိဘောဂများအားလုံးကိုကန်ဒါဟာရှိစစ်စခန်းသို့ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ သူ့အစ်ကိုကလေဆိပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သူသည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုမည်သူမျှမသိနိုင်ပေ၊ ၎င်းသည်သန်းတစ်ရာအကြောင်းပြောရန်လုံလောက်သည် ဂျာမနီတွင်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ စျေး ၀ ယ်သည် သူသည်အိတ်ဆောင်အပြောင်းအလဲကိုအကုန်အကျခံနေပုံရသည်။
“ စစ်ကောင်း” ၏ခေါင်းဖုံးအောက်တွင်ကြည့်ပါ၊ ဤအရာသည်သင်မြင်သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်သည်အကြမ်းဖက်သမားများအားချေမှုန်းရန်နှင့်တာလီဘန်များမှမိန်းကလေးငယ်များအားကယ်တင်ရန်ဂုဏ်ပြုသောစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အီရတ်၏အာရုံပျံ့လွင့်မှုနှင့်အာဖဂန်အစိုးရ၏မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတို့ကြောင့်သာငါတို့အနိုင်ရနိုင်မည့်စစ်ပွဲဖြစ်သင့်သည်။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ရအောင်။ အဂတိလိုက်စားမှုသည်စစ်ပွဲတွင်ဒီဇိုင်းအားနည်းချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ကတာလီဘန်တွေကိုမဖြုတ်ဘူး။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ငါတို့စစ်ဘုရင်တွေကိုငွေအိတ်တွေပေးခဲ့တယ်။
Kandahar ရှိအမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထူးလက်ထောက်ဟောင်း Sarah Chayes ကအနောက်တိုင်းသားများသည်ခေါင်းကိုမကြာခဏကုတ်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမရ။ “ ဒါပေမယ့်အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ခေတ်မီကွန်ယက်တွေကအုပ်ချုပ်ဖို့ဘယ်တုန်းကမှမရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ပဲ။ ပြီးတော့ဒီအလုပ်မှာသူတို့ကအံ့မခန်းအောင်မြင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့တယ်။ ”
လူမျိုးတစ်မျိုးအစား၊ ငါတို့တကယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရာဟာစစ်အခြေစိုက်စခန်း ၅၀၀ ကျော်နဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာဘဲ။ ဒါကအမြဲသဘောတူညီချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Donald Rumsfeld က“ ငါတို့ကဒီစစ်ဘုရင်တစ် ဦး စီကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်အတွက်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်မှတ်စုတိုတစ်ခု” ကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ quid pro quo ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ စသည်ဖြင့်လဲလှယ်ပါ အဆိုပါဝါရှင်တန်ပို့စ်.
စစ်ပွဲသည်များစွာသောအမေရိကန်များနှင့်ဥရောပတိုက်သားများအတွက်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ တစ်ခုပေါ့ 2008 လေ့လာချက် အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်ခွဲဝေပေးသောငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အလှူရှင်နိုင်ငံများသို့စုပေါင်းအကျိုးအမြတ်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံလစာများဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လောက်ပဲ အမေရိကန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကူအညီ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၀၂ နဲ့ ၂၀၂၁ ကြားအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုတကယ်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်အစိုးရကို ကျန်အများစုသည်ကျောင်းများ၊ ဆေးခန်းများနှင့်လမ်းများတည်ဆောက်ရန်ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံတန်ကန်ထရိုက်ရထားသော New Jersey အခြေစိုက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Louis Louis Berger Group ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများသို့သွားသည်။ ဖမ်းမိပြီးနောက်တောင်မှ အရာရှိတွေကိုလာဘ်ပေးတယ် နှင့် စနစ်တကျအခွန်ပေးဆောင်သူများ, အ စာချုပ်တွေဆက်ရှိနေတယ်.
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအနောက်တိုင်းရှုံးနိမ့်မှုအတွက်ရှင်းပြချက် (ဆင်ခြေ) အဖြစ်မကြာခဏငါ့ဥစ္စာကိုယူခဲ့တာ” ဟုလန်ဒန် SOAS တက္ကသိုလ်ပဋိပက္ခနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာရေးပါမောက္ခ Jonathan Goodhand ကကျွန်ုပ်အားရေးသားခဲ့သည်။ အီးမေးလ်။ အမေရိကန်များသည်“ အာဖဂန်လူမျိုးများကိုလက်ညှိုးထိုးလျက်၊ လောင်စာဆီနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးထောက်ခံမှုမှအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလုံးတွင်သူတို့၏အခန်းကဏ္ကိုလျစ်လျူရှုနေစဉ်”
အကြမ်းဖက်မှုစစ်ပွဲကိုဘယ်သူအနိုင်ရခဲ့လဲ။ ဂျော့ခ်ျဒဗလျူဘုရှ်၏သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်လှူဒါန်းခဲ့သောနိုင်ငံရေးကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သောအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးကန်ထရိုက်များ၊ Center for Public Integrity တို့ကအစီရင်ခံစာများတွင်အသုံးစရိတ်များကိုခြေရာခံနေခဲ့သည်။ စစ်ပွဲ၏ပြသနာများ။ တစ်ခု ခိုင်မာသော အီရတ်ဝန်ကြီးဌာနများအားအကြံပေးရန်ကူညီရန်ငှားရမ်းထားသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှာကာကွယ်ရေးလက်ထောက်လက်ထောက်တစ် ဦး ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာဘုရ်ှနှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများအတွက်အီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲများသည်များစွာအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သူက TV မှာခက်ခဲတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူသည်စစ်အာဏာရှင်သမ္မတဖြစ်လာပြီး၎င်းအားပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ လူတို့သည်အီရတ်စစ်ပွဲသည်မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်တွင်စစ်ပွဲသည်ဂုဏ်ယူစရာထွက်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်နောက်ကျသွားပြီ။
အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ရှားသောအရာသည်၎င်းနည်းလမ်းဖြစ်သည် ဖြစ်လာခဲ့သည် အာဖဂန်စီးပွားရေး အနည်းဆုံးအီရတ်မှာရေနံရှိတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်စစ်ပွဲသည်ဘိန်းကုန်သွယ်မှုမှ လွဲ၍ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကိုကျဆင်းစေခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်အတွင်းအမေရိကန်အစိုးရ ကုန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အကူအညီများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၄၅ ဘီလျံနှင့်ဂျီဒီပီအကြားလွှမ်းခြုံနေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်စစ်ပွဲများအတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၈၃၇ ဘီလီယံ $4ဘီလီယံနှင့် $ 20 ဘီလီယံ တစ်နှစ်လျှင်။
နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံခြားတပ်များအရေအတွက်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်းမြင့်တက်လာသည်။ အဲဒါကို မြင့်တက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်သမ္မတအိုဘားမား၏အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေစဉ်နှစ်နှစ်အကြာတွင်မဲဆွယ်မှုများကျဆင်းသွားသည်။
သူတို့ကဒီငွေတွေကိုသူတို့အစီအစဉ်အတိုင်းရေရှည်စီမံကွပ်ကဲနိုင်ခဲ့ရင်သာမန်အာဖဂန်တွေဘာလုပ်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာနဲ့ ၀ ါရှင်တန်မှာမူဝါဒချမှတ်သူတွေကငွေကိုတံခါးရဲ့တွန်းထုတ်မှုမှာအလျင်အမြန်တွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်ဆံသုံးတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အနည်းစုထဲကတစ်ခုပါ။
ငွေများသည်နှလုံးသားနှင့်စိတ်ကိုအနိုင်ရရန်လုံခြုံရေး၊ တံတားများနှင့်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကို ၀ ယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငွေသားပမာဏကတိုင်းပြည်ကိုအဆိပ်သင့်စေခဲ့ပြီးအဲဒါတွေကိုသုံးခွင့်မရတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးအဲဒါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကြားမှာပြိုင်ဘက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အထူးစစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်က“ သုံးစွဲတဲ့ငွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ကစုပ်ယူနိုင်တာထက်အများကြီးပိုပါတယ် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမရ။ “ အခြေခံယူဆချက်မှာအဂတိလိုက်စားမှုသည်အာဖဂန်လူမျိုးများကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအလှူရှင်များ၏ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုသည်အဖြေဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတွန်းအားပေးနေကြောင်းသဘောပေါက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။ ”
ရလဒ်သည်ကာစီနိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကဲ့သို့ပိုမိုလည်ပတ်နေသောစိတ်ကူးယဉ်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Ponzi အစီအစဉ် နိုင်ငံတစ်ခုထက် မင်းအမေရိကန်တွေ ၀ ယ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရောင်းရင်းများချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စက်ရုံ (သို့) ကောက်ပဲသီးနှံတွေဘာလို့စိုက်တာလဲ။ တာလီဘန်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူတို့ကိုငွေမပေးနိုင်တဲ့အခါဘာကြောင့်တိုက်ရတာလဲ။
ဒေါ်လာ ၁၀၆ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိပင်တဂွန်စာချုပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောစစ်မှုထမ်းစာရင်းကိုင်တစ် ဦး သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်“ သောင်းကျန်းသူများ၊ ရာဇ ၀ တ်ဂိုဏ်းများသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်အာဖဂန်အရာရှိများ” ၏ခန့်မှန်းချက်များအရသိရသည်။ အဆိုပါဝါရှင်တန်ပို့စ်.
လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပြင်ပမှ ၀ င်ငွေမမှီခိုနိုင်သောနိုင်ငံများအတွက်နာမည်တစ်ခုရှိသည်။ ငှားရမ်းသောပြည်နယ်များမရ။ ၎င်းကိုအများအားဖြင့်ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများအတွက်သုံးလေ့ရှိသော်လည်းယခုအခါအာဖဂန်နစ္စတန်သည်အစွန်းရောက်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လွင်နေသည်။
အစီရင်ခံစာ အာဖဂန်နစ္စတန်လေ့လာသုံးသပ်သူများကွန်ရက်မှ Kate Clark ကဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုအာဖဂန်နစ္စတန်၏အငှားစီးပွားရေးကမည်သို့ယိုင်လဲစေကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အခွန်သည်နိုင်ငံခြားသားများထံမှငွေများစီးဆင်းလာသောကြောင့်ခေါင်းဆောင်များသည်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများထက်အလှူရှင်များကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
အာဖဂန်အဂတိလိုက်စားမှုအကြောင်းအစီရင်ခံစာတွေရေးဖို့ဥရောပအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နဲ့ကဘူးလ်မှာနေ့လယ်စာစားတဲ့နေ့မှာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာစစ်ပွဲတွေကလမ်းပေါ်မှာကျဆုံးသွားပြီဆိုတာငါသိခဲ့တယ်။ သူအခုမှရောက်တာ၊ ဒါပေမယ့်သူလုပ်ရမယ့်အရာတွေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိပြီး - လုပ်သက်ပေါ်မူတည်ပြီးအာဖဂန်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အပါအ ၀ င်စိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူကသူ့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုအကြံဥာဏ်မျိုးဘယ်တော့မှရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ သို့သော်ကဘူးလ်တွင်သူ၏စိတ်ကူးများကိုလက်ခံရယူရန်ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သူ့အတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တောက်ပတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
အာဖဂန်လူမျိုးများသည်ယခုပင်ထောက်ခံမှုမထိုက်တန်ဟုပြောရန်ဤအရာတစ်ခုမှမရှိပါ။ သူတို့ဘာလုပ်မလဲ။ ဒါပေမယ့်ဒီထက်အများကြီးပိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ် အသုံးစရိတ်ပိုနည်းတယ် ပိုစဉ်းစားနည်းမှာ
တာလီဘန်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းဘာပြောလဲ။ စစ်တပ်တစ်ခု ၀ ယ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာသက်သေပြတယ်။ သင်ခဏငှားနိုင်သည်။ ငွေ spigot ကိုပိတ်လိုက်သည်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်မည်မျှပတ်လည်ဝိုင်းနေသနည်း။ Gul Agha Sherzai, စစ်ဘုရင်ဘက်လှည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဟုတ်ပါ။ သူသည်တာလီဘန်များအပေါ်သစ္စာခံမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
မတ်လ 24, 2020 အင်္ဂါရပ်များ, သဘော 1
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုလှုပ်ရှားမှုများမှလူအများကဤအရေးကြီးသောအချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းစဉ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရန်၊ စီစဉ်ရန်နှင့်လေ့လာရန်အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရှင်များမှထည့်ဝင်မည့်အရာတစ်ခုမှာငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာဗေဒနှင့်အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ဆွဲဆောင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သောအခြားဘာသာစကားများနှင့်ဥပစာစကားများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 15, 2021 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
အောက်တိုဘာလ 27, 2015 လူငယ်အာရုံစူးစိုက် 0
PeaceSpeak သည်လူငယ်များအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်စစ်ရေးအသုံးစရိတ်အပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုမျှဝေရန်ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်အလတ်စားအတွက်တင်သွင်းကြိုဆိုသည်။ PeaceSpeak သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်သည် [ဆက်ဖတ်ရန် ... ] [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]